Taliyaha Cusub ee Ciidanka Badda Soomaaliya oo xilkiisa la wareegay | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Taliyaha Cusub ee Ciidanka Badda Soomaaliya oo xilkiisa la wareegay
Taliyaha Cusub ee Ciidanka Badda Soomaaliya oo xilkiisa la wareegay
Muqdisho-(SNTV)- Taliyaha cusub ee Ciidanka Badda Soomaaliyeed Admiral; Xasan Nuur oo dhawaan loo Magacaabay ayaa xilkaasi si buuxda ugala wareegay Shalay oo ay Taariikhdu ahayd 22 Augost, ka dib munaasabad ballaaran oo ka dhacday Muqdisho.
Munaasabadda xil wareejinta oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah Saraakiisha Ciidamada kala duwan iyo masuuliyiinta Dowladda ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay taliyihii hore ee ciidamka Badda Admiral; Maaddeey Sheekh Nuureey (Ufuroow) wuxuuna kula dardaarmay Ciidanka ilaalada Badda iyo Saraakiishooduba in ay la shaqeeyaan taliyaha cusub una feejignaadaan howsha culus ee u taalla.
Taliyaha Cusub ee Ciidanka Ilaalada Badda Admiral ; Xasan Nuur ,ayaa sheegay in uu halka hadda ay marayaan howlaha taliska Ciidanka ilaalada Badada uu wax ku soo kordhin doono, isagoo uga mahadceliyay taliyihii hore kaalinta uu ka qaatay dib u dhiska Ciidanka Badda.
Madaxa hoggaanka ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto; Maxamed Maxamud Xasan Qafow ayaa ka hadlay muhiimadda Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed uu u leeyahay Dalka, isago tilmaamay in Ciidanka ilaalada Badda ay u taallo howl culus , loogana baahan yahay in ay ka soo dhalaalaan oo ay ka hortagaan kooxaha ka qowleysta Baddeena.
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa mudooyinkanba wadday dedaallo ay ku dhiseyso tirada iyo tayada Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed si loo helo ciidan awood leh, markii ay isa soo tareen dhibaatooyinka iyo boobka ay Maraakiibta shisheeye ku hayaan Biyaha Soomaaliya iyo tacaddiyada ay geystaan Kooxaha Burcad badeedda ah.
Previous articleKooxaha fanka ee Heegan iyo Onkod oo Shacabka kala qeyb galay dabaal degga maalinta labaad ee Ciidul Adxa
Next articleAabbe Macallin Ibraahim “Aniga ayaa ku guubaabiyay inuu Dalkiisa difaaco sharaf ayayna ii tahay booqashada Madaxweynaha”.